Bilood 6 3 todobaad ka hor - Bilood 6 3 todobaad ka hor #1301 by bodean713
Waxaan dib u cusbooneysiiyay jumbo iyo hadda markii aan soo dejiyo faylka uu si toos ah u bilaabay kadibna aanan helin.
Last edit: Bilo 6 3 usbuucyo by by bodean713.
Bilood 6 2 todobaad ka hor #1305 by gaas
Tag dukumiintiyada iyo soo-ururinta dhinaca dhinaca ah waa inay halkaas joogaan.
Haddii aanad ku qorin magaca faylka "Search"
6 bilood 1 toddobaad ka hor #1308 by bodean713
Waan ka xumahay in ay qaadatay muddo dheer si aan halkaan ugu soo laabto, lakiin waxaan lahaa arimo kale oo aan isku dayey inaan u baahan yahay. Waxaan fiirineynay faylka dukumiintiyada faylasha, munaasabadduna ma aysan jirin. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ogaaday in dhibaatada ay ahayd EDGE sidaas darteed waxaan isticmaalay Chrome oo ay soo iibsadeen ganaax. Thanks
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.227